Moments Neshamwari 18
Kana inyanzvi ye astral inokwanisa kuona kuburikidza nenyaya, nei ichiti hapana kutonga kwemweya wepakati kunokwanisa kukwanisa ikozvino inozivikanwa mukuratidza kuenzaniswa kwemuchena?
Mubvunzo uyu unoreva muyedzo iyo iyo Psychical Research Society yaakaisa pasi payo. Zvinonzi yakapa mari inosvika zviuru zvishanu zvemadhora kuna chero svikiro rinogona kuudza huwandu hwenzvimbo dzemaranjisi pavanodururwa muhombodo mune tswanda kana chimwe chinhu chakafanana kuti vaiswe.
Kusvika panguva ino hapana munhu akagona kufungidzira kana kutaurira nhamba chaiyo yemawereji patafura kana mudengu, kunyange vazhinji vakaita kuedza.
Kana mhinduro chaiyo ichizopihwa, inofanira kupihwa nehungwaru hwepakati kana nehungwaru iyo inodzora svikiro. Dai kungwara kwevikamu vakakwanisa kugadzirisa dambudziko kwaisazove nekushaiwa kwekutonga; asi kwete iyo yepakati kana iyo kutonga yakagadzirisa dambudziko. Dambudziko rinosanganisira kwete kugona kuona kuburikidza nenyaya, asi kuenzanisa nhamba. Zvese zviri pakati nepakati nekugona zvinogona kuona kuburikidza nenyaya, semwana kuburikidza negirazi achiona vanhu vachipfuura neparutivi rwemugwagwa. Asi kana mwana asina kudzidza kuvhiya kwepfungwa kuverenga, hazvizokwanise kuudza nhamba iri pamberi pehwindo chero nguva yakapihwa. Zvinoda pfungwa yakadzidziswa kuverenga kuverenga kuti ikwanise kuwedzera yakakura nhamba yezviverengero nekukurumidza, uye zvakadaro yakanyanyisa kurovedzwa inofanira kunge iri pfungwa iyo inokwanisa kutaura kuti mangani emari mune boka kana kuti vangani vanhu vazhinji mune vazhinji.
Sezvo mutemo, mafungiro emasvikiro haazi ekurongeka kukuru, uye masimba emasvikiro ari pasi pevhareji yevanhuwo zvavo. Iyo clairvoyant kana kudzora svikiro inogona, kunge mwana mu library, art gallery kana maruva gadheni, ona zvinhu zvirimo. Semwana kudzora kwesvikiro kana clairvoyant anogona kutaura nezvezvishamiso mabhuku mune avo anodhura zviitiko, kana zvezvakanaka zvidimbu zvemhizha, uye yemaruva akanaka, asi angave ari pakurasikirwa kunotyisa kubata nenyaya yezvinyorwa mabhuku, kushoropodza nekutsanangura hupfumi hwekunyora kana kutaura emaruva mune mamwe mazwi kunze kwekutsanangura. Iko kugona kuona kuburikidza nenyaya hazvibatanidzi kugona kwekuziva izvo zvinoonekwa.
Mhinduro yakatwasuka kumubvunzo wekuti sei pasati pasvikirwa akakwanisa kunyora bvunzo iyi: nekuti hapana munhu wenyama akadzidzisa pfungwa dzake kuti azokwanisa kunyatso tarisa zvikamu zvinoumba nhamba yakakura. Ndokusaka svikiro risingakwanisi ku clairvoyantly kuudza huwandu hwewhungowani muhomwe muhombe kana mudengu. "Kudzora kwemweya" hakuchizive, kune iko kushanda kwepfungwa kune chekuita, kupfuura pfungwa yekudzora yaiziva chero nguva kana iri iyo nheyo yekuzivisa yemunhu.
Kana paine veaivapo vaigona kuita oparesheni yepfungwa yeku computa nhamba uye vaibata nhamba mupfungwa dzake, angave kutonga kana svikiro raizokwanisa kupa mhinduro. Asi sezvo pasina imwe pfungwa iripo inogona kuita izvi, kutonga kwacho hakugone kuzviita. Hapana kutonga chero svikiro rinokwanisa kuita oparesheni yepfungwa izvo zvisati zvamboitwa nevanhu venyama.
Inotsanangudzo ipi iyo Theosophy inopa nokuda kwepasi kudengenyeka kwenyika kunowanzoitika, uye iyo inogona kuparadza zviuru zvevanhu?
Zvinoenderana neTheosophy zvinhu zvese zviri muchadenga zvine hukama. Varume, zvinomera, mhuka, mvura, mhepo, pasi nezvose zvinhu zvinoshanda uye zvinogadzirana pane mumwe. Mitumbi yakadzama inofambiswa nemiviri yakagwinya, miviri isina hungwaru inofambiswa nehungwaru, uye zvinhu zvese zvinotenderera munzvimbo dzese dzechisikwa. Njodzi imwe neimwe senge mhedzisiro inofanira kunge iri mhedzisiro yechikonzero. Zvese zviitiko zvinopindwa nezvakanaka kana zvakashata mhedzisiro nemhedzisiro yemifungo yemunhu.
Pfungwa dzevanhu dzinotenderedza kana kukwira nekuumbwa mumapoka kana makore kunge zvaive pamusoro uye zvakatenderedza vanhu, uye gore rekufunga nderechimiro chevanhu vanoriumba. Pfungwa yega yega yemunhu mumwe nemumwe inowedzera kune yehuwandu hwepfungwa iyo inomiswa pamusoro pevanhu. Saka nyika imwe neimwe inorembera pamusoro payo uye nezvayo pfungwa nemhando dzevanhu vanogara pamusoro penyika. Sezvo matenga epasi ane masimba anotamba kuburikidza nawo anokanganisa pasi, saka mamiriro epfungwa mumakore epfungwa anokanganisawo pasi. Sezvo izvo zvinopesana zvinhu zviri mumhepo, zvichizoguma uye zvawana nzvimbo yavo mudutu, saka pfungwa dzinopesana mumhepo yemupfungwa dzinofanirawo kuwana kutaura kwavo kuburikidza nezviitiko zvemuviri uye zviitiko zvakadaro sezvazviri zvemifungo.
Mhepo yepasi nemamiriro ekunze evarume vanoita pamasimba epasi. Kune kutenderera kwemauto mukati nekunze kwepasi; mauto aya uye kuita kwawo mune chero chikamu chevhu chinoenderana nemirau yakajairirwa nenyika yose. Sezvo nhangemhu dzevarume dzinoonekwa, dzichikura uye kuora pamativi akasiyana epasi, uye sevhu, zvakare, rinofanira kushandura chimiro chayo mukufamba kwemazera, shanduko dzinodiwa pakukura kwakawanda dzinofanira kuunzwa, zvichikonzera shanduko kuiswa kweiyo axis yepasi uye yemusikirwo wepasi.
Kudengenyeka kunokonzerwa nekuyedza, nekuedza kwepasi kuzvishandura kune izvo zvinokanganisa iyo uye kuenzanisa uye kuzviyanisa pachayo mukushanduka kwayo. Kana huwandu hukuru hwevanhu hwatsakatiswa nekudengenyeka zvinoreva kuti haisi nyika chete inozvigadzirisa maererano nehurongwa hwenzvimbo, asi kuti vazhinji veavo vanotambura nerufu vakasangana nazvo nenzira iyi nekuda kwezvinhu zvinokatyamadza izvo zvavanazvo. inosimbiswa.